OnePlus5သည် Android Oreo ကိုမျက်နှာဖြင့်သော့ဖွင့်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည် Androidsis ပါ
Ignacio Sala | | NOTICIAS, Android ဗားရှင်း
ပြီးတော့ငါတို့ကအခြားထုတ်လုပ်သူတွေဆီကသတင်းမရတဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်သူ OnePlus အကြောင်းသူတို့ဆက်ပြောနေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ယခင်ဆောင်းပါး၌၎င်းကိုထောက်ခံသောကောလဟာလတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အသိပေးပြီးပြီ OnePlus6သည်မျက်နှာပြင်အောက်လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာကိုပေါင်းစပ်လိမ့်မည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည် Snapdragon 845 နှင့်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီးမတ်လနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ဧပြီလအစောပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် OnePlus5ကိုအသုံးပြုနေစဉ်တွင်၎င်းသည်စတင်ခဲ့သည် Android Oreo သို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော update ကိုလက်ခံရယူပါOnePlus 5T ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်မျက်နှာမှတဆင့်သော့ဖွင့်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထပ်ဖြည့်သော update တစ်ခု။
လူကြိုက်များသောဝယ်လိုအားကြောင့် Face Unlock သည် OnePlus5အတွက်လာသည်။ တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ပျော်ရွှင်သောခရစ်စမတ်! ???
- Carl Pei (@getpeid) ဒီဇင်ဘာလတွင် 24, 2017
OnePlus ၏အကြီးအကဲ၏ပြောကြားချက်များအစနှင့်အဆုံးဖြစ်သော်လည်းအရာအားလုံးသည်သော့ဖွင့်စနစ်သည် OnePlus5သို့မရောက်နိုင်ဟုညွှန်ပြခဲ့လျှင်၊ သူတို့သည် terminal ၏လုံခြုံရေးရွေးချယ်မှုများအတွင်း၌ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြသခဲ့သည်နောက်ဆုံးအနေနှင့်ဤ update ကို Android မှ Oreo သို့လက်ခံရရှိသောသုံးစွဲသူများမှသာအတည်ပြုခဲ့သည်၊ ဒါပေမယ့်ဒီ update ကိုကြေငြာတဲ့အခါငါဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ tweet မှတဆင့်အမြင့်ဆုံးတာဝန်ရှိသည်။
သို့သော် OnePlus ၏စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြစ်သော Oxygen5နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းယူဆောင်လာသည် အကောင်းနှင့်အဆိုး Android Oreo အမျိုးမျိုးမရ။ သတင်းဆိုးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကငါတို့မင်းကိုအသိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း OnePlus ဟာ Project Treble ထဲကနေထွက်သွားပြီ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ သတင်းကောင်းများထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်များကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်ခြင်း၊ အရောင်များနှင့် ဦး စားပေးအမိန့်ပေးသတိပေးချက်များ၊ သဟဇာတဖြစ်သော applications များအတွက် floating windows များ၊ Substratum themes များအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသောသတင်းကောင်းကိုငါတို့တွေ့သည်။
ပုံမှန်အတိုင်း, update ကို တဖြည်းဖြည်းလွှတ်တင်သည်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မင်းအဲဒါကိုမခံစားနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့နည်းနည်းကြာကြာစောင့်ရလိမ့်မယ်၊ အထူးသဖြင့် screen unlock လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်၊ အဲဒါဟုတ်တယ်၊ အနည်းဆုံး 5T မော်ဒယ်တွင်အလွန်လျင်မြန်တိကျမှုရှိကြောင်းသက်သေပြထားသောမျက်နှာ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ဗားရှင်း » OnePlus5သည် Android Oreo ကိုမျက်နှာဖြင့်သော့ဖွင့်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်စတင်ရရှိသည်
OnePlus6သည်ဖန်သားပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်